बैंकिंङ - के तपाईलाई थाहा छ, सबैभन्दा धेरै तलब खाने संसारका पाँच बैंकर्स को हुन् ?
के तपाईलाई थाहा छ, सबैभन्दा धेरै तलब खाने संसारका पाँच बैंकर्स को हुन् ?
काठमाडौं । बैंकमा काम गर्नेहरुको कमाई धेरै हुन्छ भन्ने कतिपयको सोचाई हुने गरेको छ । अझै बैंकका सीईओको तलब त कति होला ? नेपालका सीईओहरुको कमाई लाखौँको छ । तर, विश्वका यस्ता सीईओहरु छन् जसको कमाई मिलियन डलरमा हुन्छ । धेरै तलब खाने सीईओहरु प्राय अमेरिकाका ठूला बैंकमा काम गर्छन् । त्यस्तै, बेलायत र स्विस बैंकहरुमा काम गर्ने बैंकरको तलब पनि आकर्षक रहेको छ । धेरै तलब खाने सीईओहरु प्रायः पुरुष छन् । धेरै तलब भएका संसारका २० सीईओ मध्ये १९ जना पुरुष रहेका छन् । उक्त सूचिमा अटाएकी एक मात्रै महिला टिडजेन थियाम हुन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवर्धित आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सबीच बैंकिङ्ग साझेदार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता अनुसार आइसीएफसी फाइनान्स आइएमई पेको बैंकिङ्ग साझेदार संस्था हुनेछ । आइसीएफसी फाइनान्सका खातावाहक सेवाग्राहीहरूले खाताको पैसा आइएमई डिजिटलमा रकमान्तर गर्न र आइएमई पे मार्फत विभिन्न सेवाहरुको भुक्तानी गर्न सकिने छ ।	थप पढ्नुहोस्
डोल्पाका चार स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा कारोबारमा समस्या
जाजरकोट । डोल्पाको चार स्थानीय तहमा अझै बैंक स्थापना हुन नसक्दा दैनिक कारोवार सदरमुकाम दुनैबाट हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकार गठन भएको करीब दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दासम्म डोल्पाका डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका, छार्का ताङसोङ गाउँपालिका र काइके गाउँपालिका गरी चार वटा गाउँपालिकामा तोकिएका बैंकले अझै आफ्ना शाखा स्थापना नगर्दा दैनिक कारोवारका लागि सदरमुकाम बस्नुपरेको हो । डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई तोकिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
जनता बैंकका कर्मचारीलाई अमेरिकी स्टयाण्डर्डको तालिम दिइने
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडको विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि र नेतृत्वविकास सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा तथा तालिम संचालन गर्न जनता बैंक र Leadership Academy Nepal (LAN) ल्यान बिच संझौता पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुरामकुंवर क्षेत्री र LAN का फाउण्डर तथा CTO अरुणराज जोशीले हस्ताक्षर गरे । LAN ले Rice University Business School, USA को उच्च स्तरीय तथा अन्तराट्रिय स्तरको सिप विकास, व्यवसायीक दक्षता तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धि शिक्षा आवश्यकता अनुसार बिभिन्न तहका कर्मचारीहरुलाई प्रदान गर्नेछ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसीसी बैंक) र आइएमई डिजिटल सोलुसनको आइएमई पे बीच डिजिटल वालेट सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंक र उक्त कम्पनीबीच आयोजित एक कार्यक्रममा सो सम्बन्धि सहमती पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र आइएमई पे का तर्फबाट संचालक खिलेन्द्र पौडेलले हस्ताक्ष्।र गरे ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । कैलालीका हावाहुरी पीडितका लागि जनता बैंकले आर्थिक सहयोग गरेको छ । गत जेठ २३ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला, धनगढी आसपासमा आएको भिषण हावाहुरीमा परि धेरै मानिस घरबिहिन बनेका थिए । पीडितहरुका लागि जनता बैंकको तर्फबाट नगद आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले संचालन गरेको ‘धनगढी उपमहानगरपालिका प्रकोप ब्यबस्थापन कोष’ लाई बैंकको तर्फबाट रु. १ लाख ५० हजार नगद सहयोग उपलब्ध गराइएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सरकारले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि एक वाणिज्य बैंक पुर्याउने नीति लिएसँगै बैंकिङ पहुँच विस्तार पनि तीव्र गतिमा भएको छ । गत वैशाखा मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा अब २८ वटा स्थानीय तहमा मात्रै वाणिज्य बैंक पुग्न बाँकी रहेका छन् । ७५३ मध्ये वैशाख मसान्तसम्मा ७२५ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले शाखा खोलिसकेका छन् भने बाँकीमा पनि खोल्ने क्रममा रहेका छन् । प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
सहकारी संस्थामार्फत ठगी गर्ने श्रेष्ठ कुपण्डोलबाट पक्राउ
ललितपुर। सहकारी संस्था संचालन गरी रकम ठगी गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका–७ बस्ने ४२ वर्षीय रोशन श्रेष्ठलाई कुपण्डोल, ललितपुरबाट बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ठगी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको २०७३ जेठ २५ गतेको फैसलाले ८ लाख ४६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ जरिवाना र २ बर्ष कैद हुने ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।	थप पढ्नुहोस्
चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रुपमा वृद्धि
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा कमी देखिए पनि विप्रेषण आप्रवाह भने उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दश महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा विप्रेषण आप्रवाह १९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको उल्लेख छ । बैंकका अनुसार दश महिनाको अवधिमा सात खर्ब २५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह सात प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ९.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पछिल्लो पटक दुईतिहाई समर्थनका साथ सत्तामा आएपछि देश विस्तारै अधिनायकवादतर्फ अग्रसर हुन थालेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नजानिंदो पाराले निरंकुशता (अटोक्रेसी) लाद्ने अभियानमा देखिएको छ । अहिले उनी बैक र वित्तिय संस्थाको संख्या घटाएर सीमित व्यक्ति र संस्थाको अभिष्ट पूरा गर्न खुलेर लागिपरेका छन् । ओली सरकार पनि केही घरानियाँको इच्छा आकांक्षा पूूरा गर्ने संयन्त्रका रुपमा रहेको छ । सरकार बनेदेखि नै ओलीको ध्याउन्न अधिनायकवादतर्फ केन्द्रित भएको हो ।	थप पढ्नुहोस्